Ungawujova kanjani i-insulin kanye nendima ye-hormone kushukela > Ukwelashwa nokuvimbela
Ungayibamba kanjani (ihambise) i-insulin kwabanesifo sikashukela
I-insulin iyinto yama-hormone ekhiqizwa ama-pancreas, amaseli wayo we-beta. Kucatshangelwa izinga lokusebenza kwalesi sitho kanye nenani le-hormone emzimbeni ongalazi ukuthi umuntu uba nesifo sikashukela noma cha.
Kunezinhlobo eziningana zezifo:
Thayipha isifo sikashukela sokuqala. I-Pathology inomlingiswa we-autoimmune. Kulesi simo, ngokumelene nesizinda sokulimala kwamaseli we-gland, ukukhiqizwa kwe-insulin yabo uqobo, okudingekile kumthethonqubo ojwayelekile wevolumu egazini, kuyancipha noma ukukhiqizwa kwama-hormone kuyeke ngokuphelele.
Thayipha isifo sikashukela sesi-2. Ezigulini ezinjalo, umthamo we-insulin ekhiqizwa nawo uyancishiswa noma ukhiqizwa ngokwezinga elijwayelekile, kepha umzimba awuboni, wawenqaba njengento yakwamanye amazwe.
Ngokujova kahle i-insulin emzimbeni ngomjovo, kungenzeka ukubuyisa ivolumu yayo elahlekile, esiza ekusilingiseni isimo esijwayelekile futhi kuvikele imiphumela eyingozi yesifo.
Kungani ukuphathwa kwe-insulin kufanele
Indlela efanelekile yokujova i-insulin ikuvumela ukuthi unikeze:
inani eliphakeme (cishe i-90%) nokufakwa kwesidakamizwa ngesikhathi egazini.
kunciphise amathuba we-hypoglycemia.
ukuhlukumezeka okuncane esikhunjeni kanye namafutha angaphansi.
ukungabikho kwe-hematomas ngemuva kwemijovo.
ukwehla kwengozi ye-lipohypertrophy - ukukhula kwezicubu ezinamafutha ezindaweni zomonakalo owenzeka njalo.
ukuncishiswa kokwesaba imijovo, ukwesaba noma ukucindezeleka kwengqondo ngaphambi komjovo ngamunye.
Isilinganiselo esiyisisekelo sokuphathwa ngokufanele kwe-insulin ushukela ojwayelekile ngemuva kokuvuka nosuku amahora ambalwa ngemuva kokudla.
Ngokufanelekile, abanesifo sikashukela abanazo zonke izinhlobo zezifo kufanele bakwazi ukuphatha imijovo ye-insulin, noma ngabe iyini inhloso yokwelashwa kwe-insulin, kanye nezihlobo nezihlobo zabo. Ngohlobo 2 lwesifo sikashukela, gxuma ushukela ngokushesha ngenxa yokulimala, ukucindezela okukhulu, izifo ezihambisana nokuvuvukala. Kwezinye izimo, i-hyperglycemia ephezulu ingadala ukuphazamiseka okukhulu kwe-metabolic, kuze kufike ku-coma (funda mayelana ne-hyperglycemic coma). Kulokhu, ukujova kwe-insulin kuyindlela engcono kakhulu yokugcina impilo yesiguli.
Akunakusho ukuthi kufanele usebenzise i-insulin ephelelwe yisikhathi, ngoba umphumela wayo awunakubikezelwa. Kungalahlekelwa bobabili ingxenye yezakhiwo zayo, futhi kuqinise kakhulu.
Uhlobo lwendabuko lokwelashwa kwe-insulin lulula kakhulu. Ukufakwa kuzodingeka kwenziwe amahlandla ama-2 kuphela ngosuku, ukukala ushukela, bese kuncipha kanjalo. Ukulula kwalokhu irekhodi lokwelashwa kwe-insulin, ngeshwa, kuphenduka ukusebenza kwalo okuphansi. Ushukela ezigulini lugcinwa kahle kakhulu ku-8 mmol / L, ngakho-ke eminyakeni edlule baqongelela ubunzima besifo sikashukela - izinkinga ngemikhumbi nohlelo lwezinzwa. Ukudla ngakunye okune-carbohydrate etafuleni kuphenduka kube kwesinye isipikili kushukela. Ukwehlisa ushukela, abanesifo sikashukela ohlelweni lwendabuko kufanele banciphise kakhulu indlela abadla ngayo, ukuqinisekisa ukuthi ukudla nokudla ngokweqile kwenzeka ngendlela efanayo, njengoba iziguli zohlobo lwesibili sikashukela zenza.
Uhlobo olunamandla lwe-insulin lunikeza okungenani imijovo emi-5 ngosuku. Ababili babo bangama-insulin amade, ama-3 amafushane. Ushukela kuzofanela ulinganiswe ekuseni, ngaphambi kokudla nangokulungiselela ukulala. Isikhathi ngasinye lapho udinga ukubala futhi ukuthi mangaki amayunithi nsuku zonke, i-insulin esheshayo edinga ukujova. Kodwa akukho cishe akukho mingcele ekudleni kule nqubo yokwelashwa kwe-insulin: ungenza konke, into esemqoka ukubala okuqukethwe kwe-carbohydrate esitsheni bese wenza umjovo wokuqala wesamba esidingekayo se-insulin.
Ongakukhetha: Funda kabanzi ngama regimens therapy lapha.
Awekho amakhono akhethekile wezibalo adingekayo kulokhu, ukubala inani elidingekayo le-insulin, ulwazi ezingeni lesikole sokuqala lanele. Ukuhlala ujova kahle i-insulin, isonto lokuqeqeshwa lanele. Manje lolu hlelo olubanzi lubhekwa njengoluthuthukayo kakhulu nolusebenzayo, ukusetshenziswa kwalo kunikeza ubuncane bezinkinga kanye nesikhathi eside sempilo yeziguli ezinesifo sikashukela.
>> Ungabalwa kanjani ngokuzimela umthamo we-insulin (kubaluleke kakhulu ukutadisha, uzothola amatafula amaningi namathiphu)
Ngingayifaka kuphi insulin yabanesifo sikashukela?
Udinga ukufaka i-insulin ngaphansi kwesikhumba, kwezicubu ze-adipose. Ngakho-ke, izindawo lapho imijovo yenziwa kahle kakhulu kufanele ibe namafutha athuthukisiwe:
Isisu yindawo ukusuka ezimbabeni eziphansi kuya kwi-groin, kufaka phakathi izinhlangothi ngendlela encane yokubuyela emuva, lapho imvamisa yamagquma enamafutha. Awukwazi ukufaka i-insulin enkabeni futhi eduze kuka-3 cm kuyo.
Ama-buttocks - i-quadrant ngaphansi kwangaphansi emuva eduze eceleni.
Hips - Ingaphambili lomlenze kusukela ku-groin kuya phakathi kwethanga.
Ingxenye yangaphandle yehlombe isuka ku-elbow iye emahlombe. Kule ndawo imijovo ivunyelwe kuphela uma kukhona ungqimba olunonile lwamafutha lapho.
Ijubane nokuphelela kokufakwa kwe-insulin ezingxenyeni ezihlukene zomzimba kuhlukile. Ngokushesha futhi kuphelele kakhulu, i-hormone ingena egazini lisuka ezicutshini ezingaphansi kwesisu. Kancane - kusuka emahlombe, emabhulokeni, futhi ikakhulukazi ngaphambili kwethanga. Ngakho-ke, ukufaka i-insulin esiswini kuyinto efanelekile. Uma isiguli sinqunywe i-insulin ende kuphela, kungcono ukuyifaka kule ndawo. Kepha ngohlobo olunamandla lokwelashwa, kungcono ukonga isisu nge-insulin emfushane, ngoba kule ndaba ushukela uzodluliselwa ezicutshini ngokushesha, ngoba ungena egazini. Ngomjovo we-insulin ende kuleli cala, kungakuhle ukuthi usebenzise okhalweni ngamabhuthi. I-Ultrashort insulin ingangenwa noma yiziphi kulezi zindawo, ngoba ayinakho umehluko ngesilinganiso sokuxoshwa ezindaweni ezahlukene. Uma ukufaka i-insulin ngesikhathi sokukhulelwa esiswini kunzima ngokwengqondo, ngokwesivumelwano nodokotela, ungasebenzisa ingalo noma ithanga.
Izinga lokungena kwe-insulin egazini lizokhuphuka uma isiza somjovo sifudunyezwa emanzini ashisayo noma simane nje sithathwe. Futhi, ukungena kwe-hormone kushesha ezindaweni lapho kusebenza khona izicubu zomzimba. Izindawo lapho i-insulin izofakelwa khona esikhathini esizayo esiseduze akufanele inehaba futhi ihambise ngenkuthalo. Ukwenza isibonelo, uma uhlela ukuhamba ibanga elide endaweni eqinile, kungcono ukufaka umuthi esiswini, futhi uma uhlose ukupompozela umshini wokucindezela - ungene ethangeni. Kuzo zonke izinhlobo ze-insulin, okuyingozi kakhulu ukumuncwa ngokushesha kwama-analog asebambeni abasebenza isikhathi eside; ukushisa indawo yomjovo kuleli cala kwandisa kakhulu ingozi ye-hypoglycemia.
Izindawo zokujova kumele zishintshwe njalo. Ungasifaka isidakamizwa ebangeni elingu-2 cm ukusuka kusayithi lomjovo owedlule. Ukujova okwesibili endaweni efanayo kungenzeka ngemuva kwezinsuku ezintathu uma kungekho okulandelwayo esikhunjeni.
Funda ukujova i-insulin kahle
Ukuphathwa kwe-insulin kwe-intramuscular kuyinto engathandeki, ngoba kulesi simo isenzo se-hormone siya ngokuqina ngokungacabangi, ngakho-ke, amathuba okuhla kweshukela okunamandla kuphezulu. Kungenzeka ukunciphisa ingozi yokungena kwe-insulin emisipha, esikhundleni se-adipose izicubu, ngokukhetha isirinji efanele, inqubo yendawo kanye nenqubo yokujova.
Uma inaliti yesirinji yinde kakhulu noma ungqimba lwamafutha lwanele, imijovo yenziwa esikhunjeni sesikhumba: gxobha isikhumba ngeminwe emibili, faka i-insulin esiqongweni esibayeni, ukhiphe isirinji bese ususa iminwe kuphela. Ukunciphisa ukujula kokungena kwesirinji kungenzeka ngokungenisa ku-45% ebusweni besikhumba.
Ubude obuyinaliti yenalithi nezici zomjovo:
Kuzokwenzekani uma abanesifo sikashukela bengayifaki i-insulin
Uma umthamo kashukela emzimbeni ungalawulwa kahle isikhathi eside, kuvela izimo eziyingozi maqondana nezitho zangaphakathi nezinhlelo. Lokhu kusebenza ezimweni zokuntuleka kwe-insulin therapy noma ngokuziphatha kwayo okungafanele.
Kusukela ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela mellitus kubonakaliswa ngumphumela omubi wokujikeleza kwegazi, i-vascular, nerve system, izingqinamba ezisekuqaleni ziqhamuka kulawo. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokubuka nokuhlolisisa, ukusebenza kwezitho zomzimba, kwabesifazane nakwabesilisa, luyaphazamiseka.
Izinkinga ezingaba khona zesifo sikashukela zifaka:
ukwephulwa kwenhliziyo (i-arrhythmia, ubuhlungu be-sternum, i-tachycardia, njll.),
gangrene ngesidingo esengeziwe sokunqunywa (kaningi izitho eziphansi),
ukulimala okubonakalayo noma okuphelele,
ukuthuthukiswa kwezifo ezithathelwanayo esinyeni nasezinso,
ukuvela kokungasebenzi kahle kwe-erectile, ukungabi namandla.
Ungakugwema lezi zinkinga ngokugcina amazinga kashukela egazini, ngokubheka indlela yokuphila enempilo nenempilo. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukulandela izincomo ezilandelayo:
Susa isisindo ngokweqile, welapha ukukhuluphala,
gcina umsoco ofanele futhi olinganiselayo,
ungafaki ukudla okulula okudla ngokudla okunoshukela,
susa imikhuba emibi: ukubhema, ukuphuza utshwala, ukusebenzisa izidakamizwa,
phila impilo esebenzayo.
Umuthi wesifo sikashukela unqunywa ngudokotela, kucatshangelwa uhlobo lwesifo, ikakhulukazi impilo ejwayelekile.
Ngabe kubuhlungu ukujova i-insulin
Ezimweni eziningi, ngesikhathi sokuphathwa kwento ye-hormonal, izimpawu zobuhlungu azikho. Ukudumazeka kuvame ukwenzeka lapho sisebenzisa inaliti engalahli kabusha. Ngemuva komjovo wokuqala, ukuphela kwenaliti kukhubazekile, okungabonakala lapho usebenzisa umshini wokukhulisa.
Ukusetshenziswa kabusha kwenalithi yokulawulwa kwe-insulin kubangela ukulimala kwezicubu endaweni yomjovo, obangela izimpawu zobuhlungu, i-hemorrhage. Ngakho-ke, kubalulekile ukusebenzisa inaliti entsha kumjovo ngamunye wehomoni.
Kwenzekani uma uphuthelwa umjovo
Uma uhlelo lokuphathwa kwe-hormone luphuliwe, okungukuthi, uma ukwazile ukweqa ihlumela le-insulin ende, awudingi ukujova amahora amaningi. Kulokhu, isinxephezelo sokuntuleka kwento ngendlela yokwandisa umsebenzi womzimba siyakhonjiswa. Ngamanye amagama, udinga ukuhambisa okuningi, ngezikhathi nesikhathi usuku lonke ukwenza izivivinyo.
Uma umjovo we-insulin ehlala isikhathi eside ungaphuthelwa, lapho ukuphathwa kwe-hormone kudingeka khona ezikhathini ezi-2 phakathi nosuku, umthamo we-0,5 wokuphuthelwa ungezwa komunye womjovo.
Uma uphuthelwe umjovo we-insulin emfushane, udinga ukunikeza umjovo, kodwa kuphela uma ukude kukhumbula ukwephulwa kombuso ngokushesha ngemuva kokudla noma phakathi namahora okuqala ayi-1-2.
Uma uphuthelwe umjovo we-bolus insulin, kunconywa ukuthi unikeze umjovo, kepha usebenzisa umthamo we-hormone ophansi, okuvumela ukuthi uqede i-hyperkalemia.
Kukangaki udinga ukufaka i-insulin
Isikhathi esiphakathi kokuphathwa kwe-insulin kuya ngokuthi hlobo luni lomuthi olusetshenziswayo. Ngakho-ke, i-insulin emfushane nehlala isikhathi eside iyagcinwa.
I-insulin esebenza ngokubambisana kufanele ithathwe ngaphambi kokudla, ngoba kuzothatha imizuzu engama-25 kuya kwengama-30 ukungena egazini. Izici ze-insulin esetshenzelwa isikhathi esifushane:
i-insulin yezilwane noma yomuntu ikhona
umphumela omkhulu wokwelapha uthatha amahora angama-2-4,
egazini kukhona amahora angama-8, akusekho.
I-insulin esebenza isikhathi eside iboniswa yizici ezilandelayo:
Ezimweni eziningi, umjovo owodwa uyadingeka usuku lonke,
inani eliphakeme le-hormone egazini libonakala ngemuva kwemizuzu engama-30,
ama-hormone emzimbeni akhona amahora angama-24, akusekho.
Kunconywa ukuphatha i-hormone ngamahora afanayo nsuku zonke. Lokhu kuholela ekuvinjelweni kokubambezeleka okungenzeka ekuthatheni kwezinto kanye nasekuthuthukisweni kwemiphumela emibi.
Umthamo wansuku zonke we-insulin omfushane futhi omude ubalwa kanjena:
ekuseni - 35%,
kwasemini - 25%,
ngaphambi kokudla kwakusihlwa - 30%,
ngaphambi kokulala - umthamo we-10 wansuku zonke.
Akunconywa ukuqoqa amayunithi angaphezu kuka-14- 16 kwisirinji esisodwa. Uma kudingekile ukwethula umthamo omkhulu, inani lemijovo lenyuka ngokuncipha kwezikhathi eziphakathi kwabo.
Isirinji nokukhethwa kwenaliti
Ukwelashwa kwesifo sikashukela nokufakwa kwehomoni, kubalulekile ukukhetha inaliti efanelekile yesirinji. Ukuqina kwawo kunqunywa ngokuhambisana nesilinganiso se-gage (G): ubukhulu benkomba, ubukhulu benaliti. Ezinganeni ezinesifo sikashukela zisebenzisa izinaliti ezondile, kubantu abadala - kucatshangelwa ukubukeka.
Ukwethulwa kwezinaliti ezonda kukhululeke kakhudlwana futhi akubangeli ukungaphatheki kahle, ngoba akukho ngcindezelo olwandisiwe ku-epidermis ngesikhathi sokubhoboza. Kukhona izinaliti ezimakwe “izindonga eziwumngcingo”, ezihumusha ngokuthi “izindonga ezithambile”. Naphezu kokugobhoza kobuhlungu besikhumba, i-insulin ihamba ibangana nezinaliti ezinjalo, ezingachazwa yindinyana emincane.
I-Insulin Injection Technique
Inkambo yokulawulwa kwe-hormone yesifo sikashukela imi kanje:
ukukhishwa kwendawo lapho kufakwa khona inaliti (ukuphathwa kwendawo ngotshwala noma ezinye izindlela akudingeki),
ukuthatha isikhumba sakho ngesithupha nophambili, esinciphisa ingozi yokungena esakhiweni semisipha,
ukufakwa kwenalithi emaphethelweni angaphezulu esibaya esikhumbeni kungama-degree angama-45 noma nge-perpendicular ebusweni besikhumba,
ukwethulwa kwalesi sidakamizwa ngemizuzwana embalwa,
Ngokulandela le mithetho engenhla, unganciphisa ubungozi bemiphumela emibi ngenxa yokuphathwa okungafanele kwe-insulin.
Ngabe ngidinga ukusula isikhumba sami ngotshwala ngaphambi kwe-insulin
Izakhi zotshwala zinomthelela ekubhujisweni kwe-insulin. Ngalesi sizathu, ukwelashwa kwangaphambili kwendawo edingekayo ngethuluzi elifanele akudingeki. Lokhu kungachazwa nawukungabi bungozi kokutheleleka kokungena endaweni yokulimala kwenaliti ngokusebenzisa umuthi wesimanje kanye nesirinji.
Ungawujova kanjani i-insulin
Ukwethulwa kwe-insulin ngaphandle kokwakhiwa kwesibaya se-epidermal kungenzeka, ngaphezu kwalokho, ekwelashweni kweziguli ezindala nezingane. Kodwa-ke, lokhu kuvunyelwe kuphela uma izicubu ezingaphansi zikhulu. Kulokhu, khetha inaliti emincane kakhulu yesirinji nosayizi omncane.
Ezinye iziguli zinconyelwa ukuba zikhethe inalithi enobude obungu-8 no-12,7 mm, ukungena esibayeni esenziwe isikhumba.
Lapho kungcono ukuphatha i-insulin
Kunconywa ukujova i-insulin kwenye yezindawo ezilandelayo zomzimba:
Kubalulekile ukuvikela i-hormone ukuthi ingangeni ungqimba olujulile lwe-epidermal, okungukuthi, kwizakhi zemisipha. Ngaphandle kwalokho, izosebenza ngokushesha, okudala ingozi yokwehla okubukhali koshukela. Ngokujula kwenalithi enganele, okungukuthi, ngaphakathi, ukufakwa kwe-insulin kwehlisa ijubane, okuqeda umphumela odingekayo wokwehlisa ushukela.
Ukufakwa ngokushesha kwalo muthi kuyabonakala lapho kungeniswa esiswini, kuhamba kancane - ezindaweni zobukhazikhazi nezabesifazane.
Ngabe ngidinga ukufaka i-insulin noshukela ophansi
Akunakwenzeka ukunikeza impendulo eqondile yalo mbuzo. I-insulin emfushane noma ye-ultrashort, ekhishwa ngaphambi kokudla, ifaka ibha yokudla neyokulungisa. Okokuqala kuyadingeka ukuthi ama-carbohydrate adliwayo kanye namaprotheni angamunwa, owesibili - ukujwayeza izinga ushukela ophezulu.
Ngokwesilinganiso esinciphile sikashukela emzimbeni, ukwethulwa kwe-bolus yokulungisa akudingekile. Kulokhu, i-bolus yokudla nayo iyancishiswa.
Ngingakwazi ukusebenzisa i-insulin ephelelwe yisikhathi
Akunakusho ukuthi kufanele usebenzise lesi sidakamizwa ngempilo yeshelufu ephelelwe yisikhathi. Lokhu kusebenza nasendleleni eyonakalisiwe engalethi umphumela wezokwelapha oyifunayo. Ngaphezu kwalokho, kuzodala ingozi eyengeziwe empilweni. Izidakamizwa ezinje zinconyelwa ukuba zilahlwe kwikhabethe yemithi yasekhaya, okungukuthi, elahliwe.
Ungayifaka kangaki insulin nge-syringe efanayo
Isirinji senzelwe kuphela ukusetshenziswa okukodwa ngaphandle kokuphinda usithathe isidakamizwa nokungenisa emzimbeni womuntu.Inalithi ngayinye inophawu oluvimbela ukusetshenziswa kwalo okuphindwe kabili. Umenzi akayona inkinga yezempilo yokusebenzisa inalithi ephindaphindwe.
Esinye isizathu sokwenqabela ukusetshenziswa kwenalithi ukuthi ngemuva kokufakwa kwehomoni, izinhlayiya ze-insulin zihlala ku-lumen yazo, okuthi, ngemuva kokoma, ikhuthaze ukwakheka kwamakristalu. Lapho usebenzisa i-syringe futhi, eyokugcina iba yimbi ngokuthuthuka komuthi ku-lumen, obangela ukuba isirinji liphuke.
Ungayifaka kanjani i-insulin ngesikhathi sokukhulelwa
I-insulin isidakamizwa esiphephile ekukhulelweni esisiza ukulondolozwa kwamazinga kashukela ajwayelekile egazini. Umthamo, ikakhulukazi ukusetshenziswa komuthi, unqunywa udokotela oya khona. Umthamo wansuku zonke ungancishiswa, ngokwesibonelo, lapho kukhona i-toxicosis enkulu, noma ukwanda (ezimweni ezihlukile).
Isidingo somzimba sama-hormone sikhuphuka kuma-trimesters e-2 ne-3, lapho ingane ikhula futhi ikhula ngamandla. Womabili womjovo ama-hormone endabuko asetshenziswa, esebenzisa isirinji namapeni wesirinji, kanye nephampu ye-insulin.
Ukusabela okweqile nokubi
Uma kwenzeka kweqiwa ngokweqile komthamo we-insulin kunconywe udokotela, kwenzeka ngokushesha i-hypoglycemic syndrome. Lokhu kungachazwa ngokubopha kwayo yonke i-glucose etholakalayo, ebangela ukuntuleka kwe-hormone okushiwo.
Ukubonakaliswa okubonakaliswa kokweqisa kwempahla ngokweqile kubonakaliswa ngokulandelayo:
Ukuphathwa kwe-insulin kwe-insulin kubangela i-lipodystrophy (ukwehla kwenani lezicubu ze-adipose ezicutshini ezingaphansi) endaweni yokuphatha umuthi. Noma yikuphi ukulungiswa kwe-insulin okuhlanjululwe kakhulu ezimweni ezihlukile kucasule ukusabela komzimba.
Ukwelashwa kwezimpawu ezingezinhle kuwuphawu. Kwenziwa ukwelashwa okuqeda amandla ngokushesha, bese umuthi uthathelwa indawo nge-analogue.
Naphezu kwesidingo somzimba se-insulin ezigulini ezinesifo sikashukela, umuthi ungahle uphulwe ukuze usetshenziswe kwezinye izimo. Imikhawulo ifaka:
i-pathologies, isibonakaliso esine-hypoglycemia,
ukuthuthukiswa kwesibindi esibuhlungu,
ukuthuthukiswa kwesifo sokuqina kwesibindi,
ukuthuthukiswa kwe-hemolytic jaundice, eyenzeka ngokumelene nesizinda sokuqhekeka kwamangqamuzana abomvu egazi,
ukuthuthukiswa kwe-pancreatitis - inqubo yokuvuvukala kumanyikwe,
ukuthuthukiswa kwe-jade - inqubo yokuvuvukala ezinso,
ukuthuthukiswa kwe-amyloidosis yezinso - i-pathology ebangelwa ukungasebenzi kahle kwezinqubo ze-metabolic maqondana ne-protein,
ukuba khona kwesilonda se-peptic esiswini noma duodenum,
isifo senhliziyo esibolile.
Ngokunakekelwa okukhethekile, amalungiselelo e-insulin asetshenziselwa i-mellitus yesifo sikashukela kanye ne-psychology enjalo ehlanganisiwe njengokuntuleka kwe-coronary. Esimweni sokugcina, kunokungalingani phakathi kwesidingo se-oksijini yomsipha wenhliziyo nokudla komoya-mpilo okukuwo.
Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuqapha isimo ngesikhathi sokwelashwa kwe-insulin ngokumelene nesizinda se:
Isifo sika-Addison (i-adrenal gland insuffence),
Ukuze i-insulin ilethe inzuzo enkulu yokwelashwa, kubalulekile ukulandela imithetho yokusetshenziswa kwayo, umthamo onconyelwe obekwe udokotela ohambelayo. Ukuzelapha ngokwakho sikashukela akwamukeleki. Kulesi simo, ukululama akugcini nje ngokunciphisa, kepha kulimala umonakalo owengeziwe wezempilo, odinga ukwelashwa okuthile.
Uke wabona iphutha? Khetha bese ucindezela I-Ctrl + Fakaukusazisa.